HALKAAN KA AQRISO W.W MOGTIMES EE SAAKAY OO AH 5-OCT-2020
Monday October 05, 2020 - 09:23:51 in Wararka by Mogadishu Times
Madaxtooyada Oo War Kasoo Saartay Booq ashada Farmaajo Ee Ereteriya Madaxweynaha J/F/Soomaaliya Maxamed C/hi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ay aa gaaray M/Asmara ee xar unta dalka Erete riya, hal kaas oo ay uga bilaabm atay booqasho 2 maalm
Madaxtooyada Oo War Kasoo Saartay Booq ashada Farmaajo Ee Ereteriya Madaxweynaha J/F/Soomaaliya Maxamed C/hi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ay aa gaaray M/Asmara ee xar unta dalka Erete riya, hal kaas oo ay uga bilaabm atay booqasho 2 maalmood ah ,Madaxweyna ha iyo wafdigiisa waxaa qaabilaad iyo soo dhaweyn diirran ugu sameeyey Garoonka Diya aradaha ee Asmara Madaxweynaha dalkaas Isaias Afwerki iyo xubno ka tirsan Goleyaasha Dowladda Ereteriya. 2da Madaxweyne ayaa ka wadahadlaya ha nnaanka kor loogu qaadi karo iskaashiga siya asadeed, dhaqaale iyo bulsho ee labada dal, si loo dardargeliyo qorsheyaasha ku qotoma gan acsiga, maalgashiga iyo isku xirnaanta bul shada Gobolka. Madaxweynaha dalka Ereteriya Isaias Afw erki ayaa muujiyey dareenkiisa farxadeed ee booqashada Madaxweynaha iyo wafdigiisa, waxa uuna tilmaamay in boqashadani ay qeyb ka tahay dadaallada wadajirka ah ee 2da dowl adood ay ku bixinayaan kor u qaadidda xiriirka iyo iskaashiga oo mudnaan u leh labada dal. D/Soomaaliya waxaa ka go'an adkeynta xi riirka iskaashi iyo dhaqaale ee dalalka gobol ka, taas oo xoojineysa in dalkeennu uu door muhiim ah ka qaato geeddi socodka horumarin eed ee ay hiigsanayaan dalalka gobolku
R/W. Rooble Oo Ammarro Ku soo Rogay Golaha Wasiiradda Ee Xilka Sii-Haaya
R/Wasaaraha XF/S. Maxamed Xuseen Roo ble ayaa soo saaray amarro Cusub oo ku soc da Xubnaha Golaha Wasiiradda ee Xil-gaarsi inta ah ee Xukuumaddii hore.
Wareegto ka soo baxday Xaf iiska R/W.Rooble ayaa waxaa xubnaha G/Wasiiradda ee Xil-ga arsiinta lagu faray in R/W/ha lag ala tashado go’aan kasta oo ay gaarayaan ama qoraal kasta oo ay soo saarayaan.
Sidoo kale waxaa xubnaha Golaha lagu am ray in la tashi ka dib nuqul ka mid ah Qoraalad ooda ay soo ogeysiiyaan R/W/ha & sii hayaha xilka R/Wasaare ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed Khadar.
Waxaa kaloo Wareegtada R/W. Rooble lagu sheegay in aan la aqbali doonin tallaabo kasta oo ka hor imaaneysa Dastuurka dalka u yaalla iyo habraaca Xukuuumadda.
Si kastaba Tallaabadan ayaa ka dambeys ay, ka dib markii Wasiirada xilka sii haya ay muddooyinkan wadeen is bedello iyo magacaa bis boosas xileed qeybaha wasaaradahooda.
Hoos ka Akhriso Wareegtada kasoo baxay Xafiiska R/Wasaare Rooble.
2. In marka hore Ra’iisal wasaaraha lagala tashado go’aan kasta oo ay gaarayaan ama qo raal kasta oo ay soo saarayaan xubnaha gola ha wasiiradda ee xil-gaarsiinta.
3. La-tashiga Ra’iisal wasaaraha kadib, qo raal kasta oo ka baxaya xubnaha golaha wasiirada ee xil-gaarsiinta, waa in nuqul ogeysi in ah la soo siiya Ra’iisal wasaaraha iyo sii-ha yaha xilka Ra’iisal wasaare ku-xigeenka.
C.C/ Shakuur Iyo Cabdiweli Gaas Oo Aragti Dhow ka yeeshay Doorashada 2020/21
Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ahna hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir ayaa Shalay kulan la qaatay R/Wasaarihii ho re ee Soomaaliya marna soo noqday Madaxw eynaha Puntland Md.C/weli .M. Cali Gaas.
Kulanka dhexmaray C/raxmaan C/Shakuur iyo Cabdiweli Gaas oo ka dhacay M/Nayrobi ee Caasimadda dalka ayaa waxaa looga hadlay xaaladda dalka siyaasadeed ee dalka iyo Arri maha Doorashada 2020/2021 oo bisha soo socota bilaaban doonto.
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir oo qoraal soo saaray ayaa waxaa uu ku sheegay in isa ga iyo Md.Gaas ay aragti isku dhow ka yeesh een hanaanka iyo natiijada doorashada intaba.
"Waxaan Shalay kulanay RW hore ee xuk uumadii kmg ahayd, ahaana madaxweynihii ho re ee Puntland Dr C/weli Cali Gaas. Waxaan ka wada hadalnay doorasha da 2020/21. Waxaa aragti is ku dhow ka yeelanay hana anka iyo natiijada doorasha da intaba” ayuu yiri C/raxmaan C/Shakuur.
Siyaasiga C/raxmaan C/Shakuur ayaa hor ey ula kulmay siyaasiyiin, Mas’uuliyiin kala du wan iyo Wakiilka QM ee Somaliya Ambasador Ja mes Swan, isagoona kala hadlay Doorasha da 2020/2021 ee heshiiska rasmiga ahaa laga gaaray.
Madaxweyne Geelle oo caddeeyey Mowqif kiisa Xiriirka Carabta & Israel.
Madaxweynaha Jabuuti, Md.Ismaaciil Cum ar Geelle ayaa ka horyimid xiriir diblumaasiyad eed iyo mid dhaqaale oo dalalka Jaamacadda Carabta ay la yeeshaan Yuhuuda.
Md. Geelle oo ka hadlayay xiriirka dalalka Imaaraadka, Baxreyn ay la gaareen Yuhuuda ayaa sheegay inuu u arko mid baal marsan he shiiskii 2002 ee Beirut oo dhigayay in heshiiskii nabadda, laguna muujiyay in dalalka Carbeed ay soo celinayaan xiriirka Yuhuuda haddii ay oggolaadaan in Israa’iil iyo Fal astiin noqonayaan 2 dal oo jaar ah, gumeysigana ay joojinayaan.
Mr.Geelle ayaa sheegay inay we li ku taagan yihiin hindisihii ka yi mid 2002 Boqor Cabdalla Sacu udiga ee geeriyooday, wax ka baxsana aysan hadda Jabuuti ahaan aqbaleyn.
Wuxuu carrabka ku adkeeyay in dalalka he shiiska iyo xiriirka la yeeshay Yuhuuda ay dan tooda u arkeen heshiis ay la yeeshaan Yuhuuda. "Wadamo dantooda u arkay inay xiri ir la yeeshaan Israa’iil ayaa jira, Dadka Falasti ina wey jirayaan, hadafkoodana mar uun ayay gaarayaan weyna xoroobayaan, annagana ha dafkeenii hore ayaa weli ku taaganahay” ayuu yiri Madaxweynaha Jabuuti.
Dalalka Isutaga Imaaraadka iyo Baxreyn ay aa heshiis uu kasoo shaqeeyay Mareykanka la galeen Yuhuuda, waxaana heshiiskaasi inta ba dan cambaareeyay dalalka Islaamka.
Ex. R/ wasaare Khayre oo u safray Jabuuti
R/wasaarihii hore ee XFS Md.Xasan Cali Khay re ayaa Shalay u ambabaxay caasimadda wa ddanka Jabuuti halkaas oo uu doonayo in uu ka bilaabo ololihiisa doorashada madaxtinima da Soomaaliya.
Ex-R/W.Khayre oo ay weheliyaan xubno ka tirsan xafiiskiisa ololaha doorashada ayaa la gu wadaa in ay kulamo siyaasadeed oo ku wajahan ololaha doorashada ay ka bilaabaan waddanka Jabuuti.
Md.Khayre oo xilka R/W/ha dalka hayay mu dda 3 sannadood ah ayaa ka dib markii Baarlamanku kalsoo nida kala laabtay waxa loo dii day inuu sii wado shaq ada iya doo si kmg ah loo mag acaa bay R/wasaare ku xigeen kiisi.
Sidoo kale waxaa laga hor istaagay inuu xil ka ku wareejiyo R/wasaaraha rasmiga ah ee la soo magacaabay Maxamed Xuseen Rooble.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Oo Codsi U Diray Beesha Caalamka
R/Wasaaraha XFS Md.Maxamed Xuseen Ro oble oo ka hadlaayay dhaqan-gelinta heshiiskii Doorashooyinka 2020/2021 ay ka gaareen Ma daxda dowladda iyo kuwa maamul Goboleed yada dalka ayaa dalab u diray Beesha Caal amka.Md.Roobole ayaa Beesha Caalamka ka Codsay inay taageeraan heshiiskii laga gaaray hanaanka Doorashada dalka, si doorashada u gu qabsoonto waqtigii loogu tala-galay, kuna dhacdo si daah-furan oo nabad ah.
Sidoo kale Md. Rooble ayaa Madaxweyne Maxamed Ch/i Farmaajo uga mahadceliyay tanaasulkii weynaa ee uu sam eeyay,si loo fuliyo heshiiskii Do orashada, sidoo kalena u mah adceliyay Madaxda maamul Go boleedyada& G/G/Banaadir.
Isaga oo sii hadlaayay R/W/ha ayaa waxaa uu tilmaamay in Xukuumaddiisa ay hogaamin doonto geedi socodka Doorasho xor iyo xalaal ah, isla markaana doorashada dalka Soomaali ya ku dhacdo si nabad ah.
Ugu dambeyn R/Wasaare Rooble ayaa sha cabka Soomaaliyeed ka dalbaday inay ka qeyb qaatan habsami u socodka Doorashooyinka da lka, kuwaasi oo bilaabanaya bisha soo socota ee sanadkaan 2020.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo u ambab axay dalka Kuwait
R/W/ha DFS Md.Maxamed Xuseen Rooble ayaa Shalay safarkiisii ugu horreeyay ugu am babaxay Dalka Kuweyt tan iyo markii la Magac aabay xilka, U jeedka safarka R/W/ha Somal iya ayaa waxaa uu yahay inuu ka qeyb-galo Ta csida Amiirkii dalka Kuwait Sheekh Sabah ku geeriyooday dalka Mareykanka 29-kii Bishii September ee sanadkaan.
Sidoo kale R/W Rooblea ayaa inta uu ku sugan yahay dalka Kuwait waxaa uu la kulm doonaa Amiirka dalkaas iyo Madax kale, isaga oo kala hadli doono arrimo ku saabsan xaala da Soomaaliya iyo sidii loo xoojin lahaa wada-shaqeynta 2Da dowladood.
Amiirkii geriyooday ee dalka Kuwait oo la Aasay 30-kii Bishii September ayaa waxaa la fi layaa in munaasabad baroordii ah loogu qabto dalkaas,waxaana ka qyeb-geli doona inta ba dan hoggaamiyeyaal ka socda Dalal Carbeed.
Puntland Oo DFS Ku Eedeysay Arrin Ka Taagan Deegaanadeeda
D/G/Puntland ayaa Sicir-bararka iyo Sare-u-ka ca sarrifka maalmihii lasoo dhaafay ka jiray deegaannadeeda ku eedaysay DFS.
Wa siir ku-xigeenka Maaliyad da Puntland, Cabdi Qowdhan oo la hadlay BBC-da ayaa sheegey in lacagta shilin Soomaaliga ay wayday dowlad dayactirta, wuxuu DFS ku eedeeyey inay cashuuraha ku qaado Doollar, isla markaasna aysan isticmaalin lac agta dalka.
Sidoo kale Wasiir Qowdhan ayaa waxaa sheegey in Puntland oo keliya laga isticmaalo shilin Soomaaliga, iyaguna ay cashuurta ku qaadaan. W/W/Puntland Xasan Shire Cabdi ay aa Dorraad magacabay guddi dhaqaale oo ka soo tala bixiya xaaladda sarifka, iyadoo maalm aha soo socda ay W/Maaliyadda soo saari doo nto siyaasado lugu xakameenayo arrimaha sarifka.
Sicir bararka iyo kor u kaca sarifka Dollarka ayaa ka jira Suuqyada Puntland, isla markaa na waxaa la sheegayaa in Dorraad halka Dollar uu sarifkiisu gaaray 47,000 Shilin Soomaali ah.
Xaflad lagu taageerayay R/wasaaraha XFS oo ka dhacday Nayrobi
Xaflad ballaaran oo lagu taageerayay R/W. XFS, ayaa lagu qabtay M/Nayrobi ee dalka Ke nya, waxaana kasoo qaybgalay m adaxda Safaaradda Soomaa liya ee dalka Kenya, ganacsatada, wa xgaradka, haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshadda Sooma aliyeed ee ku nool dalka Kenya.
Munaasabaddan oo si wayn loogu taageer ay R/W.XFS,Md. .M.Xuseen Rooble, ayaa sid oo kale bogaadin iyo dardaaran laagu diray R/ wasaaraha, oo dhanka qadka taleefanka kaga qaybgalaayay munaasabadda.
Safiir ku-xigeenka Safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya, ahna qunsulka 1-aad ee Safa aradda Md, Suudi Saciid Suudi, ayaa ka ma hadceliyay soo dhowaynta iyo taageeradda loo sameeyey R/W/re Md. Rooble, waxaana uu si doo kale guul u rajeeyey R/W.Cusub ee Soom aaliya.
Dhinaca Kale R/W/XFS, Md.Rooble, oo qad ka Taleefoonka kaga qa ybgalay munaasabad da ayaa dhankiisa u mahadceliyey jaalliyadda Soomaaliyeed ee dalka Kenya oo soo qaban qaabiyay xaflad daasi qiimaha badan.
Baarlamaanka Puntland Oo Su’aalo Weydi iyay Wasiir Dhabancad
Guddiga Arrimaha Gudaha, D/ha Hoose iyo hor-marinta reer miyiga ee G/Wakiillada Pu ntland ayaa kulan xarunta G/Wakiillada kulan kula qaatay W/W/Arrimaha G/F/& Dimuqraad iyadda Maamulkaas Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad.
Wasiir Dhabancad ayaa ka warbixiyey shaqooyinka Was aaradda, qorshayaasha deg san, waxyaabaha u qaab-soo may June illa September 2020 iyo weliba ca qabadaha jira, Sidoo kale xubnaha Guddiga ay aa su’aalo ka weydiiyay Wasiirka arrimaha uu ka hadlay, isla markaana Guddiga Baarlamaanka inay ka howl geli doonaan sidii wax looga qaban lahaa caqabadaha ka jira Wa saaradda ayna doorko oda ka qaadanayaan.
Kulanka Guddiga Arrimaha Gudaha, Dawl adaha Hoose iyo hor-marinta reer miyiga ee Golaha Wakiillada DPL ay la qaateen Wasiirka ayaa qeyb ka ah shaqooyinka G/W/DPL ee la socoshada Hay’adaha fulinta dalka.
Al-Shabaab oo haweeney iyo ilmo yar ka ‘afduubtay’ G/Hiiraan
Wararka laga helayo G/Hiiraan ayaa sheeg aya in dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab ay gaari kala dageen Xaaska Askari ka tirsan cii damada Xoogga dalka ee ka howl-gala gobo lkaasi, gaar ahaan Beledweyne.
Gaariga lagala dagay haweeneydaasi oo wa datay ilmo yar ayaa ka baxay M/Muqdisho, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha laamaha amniga G/Hiiraan.
Sidoo kale wararka ayaa inta asi ku daraya in dagaalyahana da Al-Shab aab ay gaarigaas ku qabteen de egaanka Mokoyle oo hoosta ga M/ Beledweyne, ka dibna ay kala dageen kaliya haweeney da asi, iyaga oo gaariga iyo rakaabkii kale ee saa rnaa fasaxay.
Maamulka G/Hiiraan iyo kan D/B/weyne ay aa haatan wada dadaallo dheeraad ah, balse lama oga halka lala aaday haweeneydaasi ‘la afduubtay’.
"Haweenayda afduuban illaa haatan lama oga meesha la geeyay. Balse, waan hubin doo naa. sida loogala degay baabuurka iyo cidda farmuuqdey waa wax wali su’aal ka taagan ta hay.” ayuu yiri mid ka mid ah mas’uuliyiinta ma amulka degmada Beledweyne.
Illaa iyo hadda ma cadda sababta loo beeg saday ama loo afduubtay haweeneydaasi, ma rka laga reebo inay tahay xaaska askari ka tirs an CDS.
Dhinaca kale askariga ay u dhaxdo hawee neydaas iyo ciidamo kale ayaa waxa ay qaade en howl-gallo ay ku soo qab-qabteen xaasas la sheegay inay u dhexaan dagaalamayaal ka tirs an Shabaab, balse markii dambe uu maamu lku sii daayey.
M/Beledweyne waxaa duleedkeeda inta bad an weeraro dhabo-gal ah ka fuliya dagaalya hanada Al-Shabaab oo weli ku sugan qeybo ka mid ah gobolka Hiiraan.
Dad Loo Soo Qabtay Weerarro Khasaaro Geystay oo Ka Dhacay Kismaayo
Hawlgallo ay ciidanka nabad-sugidda iyo si rdoonka Maamulka Jubbaland ka sameeyeen xaafadaha M/Kismaayo ee Xarunta G/Jubbada Hoose ayaa lagu soo qabtay 3ruux, kuwaasi oo falal amniga lid ku ah ka waday Magaalada as. Ragga la soo qabtay ayaa la shee g ay inay qirteen in ay bam ba anooyinka gacanta laga tuu ro ay habeenkii ku tuuri jire en goobaha ay ku caweeyaan bulshada, isla markaana weerarad aas ay ka dhasheen Khasaarooyin kala duwan
"Fashilinta iyo soo qabqabashada shabaka daan ayaa timid kadib markii ay ciidanka na bad-sugidda iyo sirdoonka Maamulka ay how lgallo xiriir ah ka sameeyeen xaafadaha M/Kis maayo” ayaa lagu yiri Qoraal kasoo baxay Ma amulka Jubbaland. Kismaayo ayaa Habeen hore wax aa ka dhacay we erar loo adeegsaday Bam Gacmeed oo lagu weeraray maqaaxi ku taalla xaafadda Farjano ee MKismaayo, waxaana ku dhaawacmay dad shacab ah oo halkaas ku sugnaa, waxaana la geeyay Xarun Caafimaad.
Muuse Biixi oo shaaciyey ‘weerar cusub oo ay ku soo qaaday’ DF iyo waxa ay u adeegsaneyso
Madaxweynaha Somaliland Md.Muuse Biixi Cabdi oo Shalay hadal ka jeediyay munaasab adda furitaanka shirka 4aad ee xisbiga Kulmi ye ayaa ka hadlay isbedellada haatan ka so cda G/Geeska Afrika, wax uuna eedeymo u soo jeedi yay DFS, isagoo baaq u di ray beesha caalamka.
Ugu horeyn Md.Biixi ay aa sheegay in haat an dun ida uu ka bilaawday hard an dhaqaale oo xoog leh, isagoo tusaale u soo qaa tay loo lanka adag ee ka dhaxeeya dowladaha Mar eykanka iyo Shiinaha, heshiiska Carabta iyo Israa’iil, heshiiska nabadeed ee Afganistan iyo Taliban.
"Adduunyada dal kasta oo leh awood dhaqa ale iyo mid ciidan, waxay ku tartamayaan ma ndiqadda aan ku noolnahay ee badda Cas, wa xaana arkeynaa is bedellada xooggan ee ka socda gobolka,” ayuu yiri Muuse Biixi.
Madaxaweynaha Somaliland ayaa sheegay in DFS oo ka faa’iideysaneysa aqoonsiga ay calamka ka heysato ay ku soo qaaday dagaal diblumaasiyadeed. "In kastoo aanaa heysan dhaqaale buuran, haddana yeeli meyno in wax yeeleynta Qarankeena dhaqaale loogu soo ga mbado,” ayuu yiri Md. Biixi.
Isagoo baaq u diraya beesha caalamka ay uu yiri, "Somaliland waxay si cad ugu sheegey saa beesha caalamka oo dhan iyo cid kasta oo daneyneysa arrinta Soomaaliyeed, in aqoonsi ga la siiyey qeyb ka mid ah dalkii bur-buray ee JS uu noqday hub lagu bur-buriyo jiritaanka So maliland.”
Waxa uu intaas ku daray in Somaliland ay diyaar u tahay in tajaabo lagu sameeyo Qara nimadeeda, isagoo tilmaamay in DFS aan had da la barbar dhigi karin Somaliland, "Somalil and Qaranimadeeda waa Bir-lab aan cidina taaban karin” ayuu yiri
Maamullada qaarkood oo Muqdisho dib uga laabtay xilli wali aan la magacaabin Guddiga Doorashooyinka
Madaxweynaha DGKG/beed Md. C/casiis Xasan Maxamed lafta-gareen iyo wafdi uu ho ggaaminayo ayaa Shalayta dib ugu laabtay M/Baydhabo Md.Lafta Gareen iyo wafdigiida waxaa garoonka diyaaradaha Shaati Gaduud ku soo dhaweeyay xubno ka tirs an Gha wasiir ada iyo xildhibaan ada G/wakiilada D/G/K/G/S & si doo kale qeybaha kala duwan ee Bulsha da oo ka kooban dhali nyaro,Haweenka iyo wax garadka.
Dhanka kale Madaxweynaha Galmudug Md. Axmed Cabdi Kaariye ayaa Shalayta dib u gu laabtay M/Dhuusamareeb ee xarunta D/ Galmudug ka dib safar shaqo uu ku joogay Ca M/Muqdisho ha lkaas oo uu kaga qeybgalay shi rarkii madaxda DFS iyo DX ee lagu go’aami yay habraaca iyo hanaanka doorashada 2020-2021. Waxaan garoonka diyaaradaha Ugaas Nuur kusoo dhaw eeyay M/weyne Ku Xigeen ka GM, G/G/ Barla maanka, Xubno ka tirsan 2 da gole ee D/G/Mud ug,Maamulka Caasimad da & qeyba ha kala duwan ee bulshada. Ma da xda maamulada Jubbaland iyo Puntl and ayaa Sidoo kale ku Sugan M/Nayrobi ee Caasimada dalka. Ololaha doorashada ayaa la gu wadaa
in uu ka bilowdo dalka.
Dowladda oo qaaday dhagxaanta ay ku xirtay wadooyinka qaar
Dowladda Soomaaliya ayaa waxaa ay xalay qaaday dhagxaanta ay horay ugu xirtay qaar ka mid ah Wadooyinka M/Muqdisho oo ay dhibaa tooyin kala duwan ku qabeen dadka Shacabka ah.
Goobaha Dhagxaanta laga qaaday ayaa waxaa kamid ah, Isgoysyada, Tarabuunka, Shee kh Cali Suufi, Digfeer oo dhama antood ka tirsan D/Hodan iyo dhagxaan taallay meel u dhow Isgoyska Danwadaagaha ee degm ada Wadajir.
Dowladda ayaa muddo hadda laga joogo wax ka badan laba sano waxaa ay sababo amni darto od dhagxaan waaweyn ugu jirtay wadooyinka jidcadayaasha ah iyo inta badan Isgoysyada wallow weli dhagxaanta ay yaalaan wadooyinka jidcadayaasha ah.
Wararka kale ay Risaala heleyso ayaa waxaa ay sheegayaan in dowladda ay qorsheyneyso in sidoo kale dhagxaanta ay ka qaado wadooyinka iyo Isgoyada kale ee Muqdisho si Gaadiidka no ocyadiisa kala duwan ay si caadi ah u maraan.
Trump oo meel fagaare ah lagu arkay isagoo saaran baabuur
Madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump oo loogaga daweynayo Covid-19 isbitaal ayaa banaanka isbitaalka uu ku jiro waxa uu u ga can haatiyay isagoo saaran baabu ur madow qaar ka mid ah taageer ayaashiisa. Arrintan oo lagu muuj inayo in caafimaadka Madaxweyna ha Maraykan ka uu wanaagsan ya hay ay aa la arkay Trump oo wajiga uu u daboolan yahay ayna gaariga la saarna ayeen labo ruux oo kale oo iyaguna afka u xiran yahay.
Madaxweyne Trump ayay ahayd markii ugu ho reysay oo lagu arko meel fagaare ah tan iyo mar kii Jimcihii laga soo qaaday Aqalka Cad oo la dhigey isbitaalka ku yaal duleedka magaalada Washington.
"Waa safar xiise leh,waxbadan ayaan ka ba rtay COVID,”ayuu ku yiri Trump muuqaal video ah oo la soo dhigey twitterka. Dhakhaatiirta ayaa sheegaya inuu soo hagaagayo caafimaadka Tru mp inkastoo la sheegay in si gaar ah loola socda dhaqdhaqaaqa sambabadiisa kadib markii la siiyay waxyaalo ka caawinaya neefsashada.
Waxaa soo baxayay dhowaan warar iskhilaafsan oo la xiriira caafimaadka Madaxweynaha Marayk anka,waxaana lagu wadaa in dhowaan laga sa aro isbitaalka sida ay sheegeen saraakiila ka tir san Aqalka Cad ee Maraykanka.
Trump ayaa inta badan sanadkan waxa uu diidi jirey in cudurka Covid-19 uu yahay khat ar,hase yeeshee waxa uu cudurkan ku dhacay dad ka badan 7 malyan oo ruux oo ku nool dalka Maraykanka halka ay u dhinteen inkabadan labo boqol oo kun oo ruux.
Dagaal dhex-maray Ciidamada Kenya & Al-Shabaab
Dagaalkaan oo geystay khasaaro kala duwan ayaa waxaa uu degaannada Taa bto iyo Cabda lla Biroole ee gobolka Jubbada Hoose uu ku dhex-maray Ciidamada Kenya oo ka tirsan AMISOM & Xubno kamid ah Ururka Al-Shabaab.
Dagaalka ayaa yimid, kaddib markii ay Al-Shabaab ay weerar een Saldhigyada Ciidamada Ke nya & kuwa Jubbaland ku lee yihiin degaannada Taabto iyo Cabdalla Biroole, waxaana hal kaasi ka dhacay dagaal muddo saacad ku dhow socday.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay sheegeen inay maqlayeen dhawaqa rasaasta ay isku adeegsan ayeen Ciidamada Kenya iyo Al-Shabaab, balse aysan sirasmi ah u cadeyn Karin khasaaraha ka la gaaray labada dhinac. Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in intii uu dagaalka socday ay sidoo kale Ciidamada Kenya iyo Al-Shabaab madaafiic is weeydaarsadeen, taas oo aan wax khasaaro ah u geysan dadka Shacabka ah.
Wararka laga helayo degaannadii lagu dag aa lamay ee Taabto iyo Cabdalla Biroole ayaa wax aa ay sheegayaan inay ku sugan yihiin Ciidama da Kenya & kuwa jubbaland, isla markaana ay halkaasi ka wadaan howlgallo kala duwan.
Dil ka dhacay degmada Balcad & faah faahin laga helayo
Wararka laga helayo D/Balcad ee G/Sh/Dhe xe ayaa waxaa ay sheegayaan in Askari ka tirsan Ciidamada Dowladda uu gudaha degmadaasi ku dilay Wiil Dhalinyaro ahaa oo kamid ahaa dadka ku nool degmadaas.